Sawirro-Madaxweyne Gaas oo Garoowe lagu soodhoweeyey. – Radio Daljir
Sawirro-Madaxweyne Gaas oo Garoowe lagu soodhoweeyey.
Agoosto 10, 2016 5:14 b 0
Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo waftigii uu hoggaaminayey ee Puntland uga qayb galay shirkii Madasha wadatashiga qaran ee magaalada Muqdisho lagu soo gebagebeeyey ayaa maanta 10 Agoosto, 2016 soo gaarey magaalada Garoowe ee Caasimadda dawladda Puntland.
Madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee Konoko ee duleedka Garoowe kusoo dhoweeyey Madaxweyne ku-xigeenka dawladda Puntland Eng. Cabdixakiim Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey, Wasiirro, Xildhibaano, saraakiisha ciidanka, saraakiil ka tirsan Madaxtooyada iyo dadweyne kale.
Madaxweynaha ayaa markii uu soo gaarey Qasriga Madaxtooyada waxaa uu ka warbixiyey safarkiisii muddada toddobaadka ah qaatay ee uu ugu maqnaa magaalada Muqdisho waxaan uu tilmaamay Madaxweynuhu in safarkaasi uu guul kusoo dhammaaday.
Sidoo kale Madaxweynuhu waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyey hirgelidda qodobbadii kasoo kasoo baxay shirka Madasha wadatashiga qaranka ee qeexayey qaababka loo soo xuli doono labada aqal ee Baarlamaanka iyo xilliga doorashooyinka Baarlamaanka iyo Madaxtooyadu ay qabsoomi doonaan.
Dhinaca kale Madaxweynuhu waxa uu bogaadiyey guushii ay ka gaartey tartankii ay gashay Ilhaan Cumar oo ah gabar Soomaaliyeed oo u tartamaysey golaha deegaanka 60B ee Degmada Minneapolis ee dalka Maraykanka, waxaana uu ku tilmaamay Madaxweynuhu in ay tusaale u noqon doonto hablaha Soomaaliyeed ee ku kala nool daafaha dunida.
Ugu dambayn Madaxweynuhu waxaa uu shacabka Puntland ugu baaqay in ay adkaystaan amniga iyo xasilloonidooda isla markaana ay si buuxda ula shaqeeyaan laamaha ammaanka ee habeen iyo dharaarba u heellan sugidda nabad-gelyada guud ee Puntland.
DHEGEYSO-Barnaamijkii Xulashada Daljir iyo Aamina Ladan Axmed.